Saamaynta maal-gashiga Saameynta: Maalgashadeena maalgashiga siyaabo horay u soo mariya maaliyadda, barnaamijka, iyo waxbarashada. Waxaanu u dhaqannaa sida hantida hantida, macaamiilka alaabta maaliyadeed, saamileyaal, iyo kaqaybgalaha suuqa si loo sii wado koritaanka iyo doorasho ujeedooyinka barnaamijka.
McKnight's Qaab-dhismeedka Istaraatiijiga ah wuxuu nagu soo wici doonaa si loo wanaajiyo kheyraadka Aasaasiga ah si loo dhiso loona xoojiyo bulshooyinka, dhaqaalaha, iyo deegaanka deegaanka sii jiri kara.
Saamaynta saamaynta waa qalab xooggan oo looga shaqeyn karo hadafkan.
Qodobada ugu muhiimsan waxaa looga baahan yahay sharcigu inuu u qaybiyo boqolkiiba 5 qiimaha hantida maaliyadeed sannad kasta si loogu adeegsado sadaqo iyo maamul. Maalgashiga saamaynta waa fursad ah in laga dhigo 95 boqolkiiba oo ka baxsan lacagta deeqda si loo hor mariyo xalka sida baahida loo qabo tamar nadiif ah iyo guryo wanaagsan. Iyada oo habkan maalgashiga qarniga 21-aad, waxaynu kordhineynaa saameyntayada saamileyda ah iyo wakiilkayaga.
Soo rog Qoraalka Siyaasadda Maalgalinta McKnight
Waxaan dooneynaa inaan soo saarno sadex sikuul oo hoos udhaca dhaqaalaha, saameynta deegaanka iyo saameynta bulshada iyo waxbarashada qoto dheer.
Waxaanu bixinaa faahfaahin faahfaahsan oo ku saabsan fikrada ah, waxqabadka, iyo casharradii laga bartay maalgashiyada saamayn gaar ah.
Saamaynta Maalgashiyada Maalgalinta, Fikradaha, iyo Khayraadka
5 Tilmaamayaasha Muhiimka ah ee Wax-ku-oolka Maalgelinta Ganacsiga
"Qaybta bulshada ayaa ku fadhiya 1-da milyan oo doollar oo ah lacag-bixinada dakhliga, iyada oo dakhliyad kastana ay bixiso fursado degdeg ah oo xooggan si loo hormariyo mustaqbal hoose.
-KATE WOLFORD, MADAXWEYNAHA IYO XARUNTA TAHRIIBKA, XUQUUQDA BAARITAANKA
Isha: Dib-u-eegista Dib-u-eegista Bulshada ee Stanford